Duco si aad lacag lacag ah ku hesho. ? Si aad lacag u hesho maanta!
Salaadda si aad lacag u hesho Sida hub ruuxi ah oo aan u adeegsan karno markasta oo aan u baahanahay, waa muhiimad weyn tan iyo caawimaad ruuxi ah si aan marwalba xiriir wanaagsan ula yeelano asxaabta iyo qoyska waa lagama maarmaan, gaar ahaan markay jiraan arrimo dhaqaale oo ku lug leh.
Amaah ku helida qof waxay u baahan tahay kalsooni waana sababtaas sababta lahaanshaha hagida ruuxiga ah si loo gaaro go'aanadeena lacageed si aad muhiim u tahay si loo hubiyo in ganacsigu u socdo shuruudaha wanaagsan iyo in saaxiibtinimadu aysan kasii xumaan doonin.
Salaaduhu waxay noqon karaan sirtaas laakiin hub aad u xoog badan si looga baxo xaaladaha adag ama dhibaatooyinkaas aan u maleyneyno inay aad uga adag yihiin sidii looga tagi lahaa.
1 Salaadda lacagta in la bixiyo Maxay tahay?
2 1) Ducada si loo soo celiyo lacagtii la amaahday
3 2) Salaadda in la siiyo
4 3) Salaad wax ku ool ah oo lacag lagu ururiyo
4.1 Tukashadani miyaa loo bixiyaa runtii lacag xoog badan?
Salaadda lacagta in la bixiyo Maxay tahay?
Weedhan wejiga ayaa ah mid aad u cad laakiin ma aha oo keliya xoogaa lacag ah la siiyo laakiin tan waxaa loo joojiyaa si ikhtiyaar ah oo aan loo baahnayn in lala galo dhibaatooyin waaweyn qofka kale. Waxaa la istcimaa mararka qaarkood markay xaaladdu xoogaa raaxo-darro dareentay.
Kaliya kuma koobna xaaladaha amaahda laakiin marka waxaan sugeynaa xoogaa lacag bixinta shaqadeena ama wax kale.
Lacagahaas shaqo ee weli harsan, waxaan ku sii dayn karnaa annaga oo sameyna salaaddaan xoogga leh.
1) Ducada si loo soo celiyo lacagtii la amaahday
Senhor, meu pai, kan xoogga badan, marka ugu horreysa, waxaan kugu mahad naqayaa nimcooyinka aad maalin walba i siiso, nolosha diirka, diirka, timaha cuntada iyo timo lebbiska;
Iga fogee adiga oo ah filho teu iyo is-hoosaysiin Aniga Pe that in xaaladdani aad ii murugsan tahay, waad igu caawinaysaa (Waxaa la yiri ama ma dhameystirna da pessoa) Ii dhiib ama dinheiro taas oo ah iimaanka iyo aaminnimada ganacsigaga.
Inaad fahanto marwalba oo aad ogaato inay marwalba tahay lagama maarmaan in la caawiyo Nossos irmãos em situções precárias, Waxaan kuu rajeynayaa inaad ka bogsato coração e seu espírito si aad ugu laabato oo aad ii siiso dinheiro aan u baahanahay inaan ku sii wado nolol sharaf leh, sharaf leh Si aad u awoodo inaad sii waddo caawinta aan ka helo semelhantes, assim mesmo si aan u awoodo inaan raaco desígnios.
Deo pai, Deus filho iyo Deus Espírito Santo ayaa u dhashay dalka Jarmalka, Tudo isso eu te peço em nome.
Waa muhiim inaad tukanaysid ducadan si ay kuugu bixiyaan lacag aamin ah.
Fursadaha ganacsi badanaa waxay la yimaadaan gacan qabasho iyagoo leh xaalado adag.
Waxaan ku dhex jirnaa bulsho raadinta faa'iidada qofka u muuqata inay tahay mashiinka inta badan, badanaa dadku waxay codsadaan amaah lacageed si ay khatar ugu galaan ganacsiyada aan had iyo jeer si fiican u socon oo aakhirka u qaadaya deyn badan iyo dhibaatooyin naftooda
Xaaladahan oo aan u baahanahay xoogaa lacag ah oo la soo amaahday si naloogu soo celiyo, waxaan u jeesan karnaa hubkan xoogga badan oo aan sida xaqiiqada ah u arki doonno jawaabta waqti aan ka yaraynno sidii aan filaynay.
2) Salaadda in la siiyo
Ilaaha Qaadirka ah iyo naxariista badan ee kugu manaystay cibaadadaada quduusnimada José Gregorio de la Rivera, oo shahiidku horay ugu sii sheegay bartamaha Golgotha ​​...
Ka dib waxaa xaqiijiyey Vatican-ka inuu yahay ilaaliyaha hantidooda sadaqada, daryeelaha lacagtooda, dahabkooda iyo dhagxaanta nasiib wanaagsan, iyadoo hadiyadda ah inay ka dhigto inay na siiso lacagta ay nagu leeyihiin. Anigoo garanaya wanaagga aad ku maal gashan tahay, waxaan kuu imid inaan ku waydiiyo ...
(Codsigaaga samee) Fadlan aniga, José Gregorio de la Rivera.
Iga caawi inaan ka gaaro xagga Rabbiga waxa aan baryada ku weyddiisto sharaf iyo sharaf weyn oo aad leedahay iyo waxtarka naftayda. Fadlan San José Gregorio si aad magacaaga u ogaato oo aad uga dhigto kuwa raacsan sababtaada.
Waxkasta oo aad iigu wanaagsanaato aniga, waxaan u balan qaadayaa sidoo kale in aan u sameeyo kuwa kale. Waxaan booqan doonaa toddobada kiniisadood oo waxaan ku tukan doonaa sabuullada aad tilmaantay. Ma doonayo qofna si xun, laakiin waxaan si fudud dib uga soo ceshan karaa deynta.
Magaca Aabaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah.
Saint Mary, na ilaali.
Tukashaddani si ay iigu bixiso oo aan uga soo kabsado lacagtii la soo amaahday waxaan sii deyn doonnaa lacagtii naga hartay xaalad kasta ha noqotee.
Gobollada jannada dagaalo muhiim ah ayaa la diriray oo aag maaliyaddu waa midda ugu dhibka badan ee uu banii'aadamka leeyahay maadaama ay ku lug leedahay baahi jireed, xiriir shaqsiyadeed iyo duruufaha qaarkood oo loo qaadan karo sidii kuwo murugsan.
3) Salaad wax ku ool ah oo lacag lagu ururiyo
Ilaaha Qaadirka ah;
Maanta waxaan kuu baryayaa inaan kuu duceeyo jannada
Iga caawi saacadahaan daa'imiska ah ee
Ma aan helin waxaan doonayo.
Maanta, iyo in kasta oo anshaxnimadayda samafalka ah,
Dhabarka ayaan u jeestay oo maan soo kaban karin
Lacagtii aniga ayaa laygu lahaa.
Sidaas darteed, aabbe jannada ahow, ayaan kuu caawiyey
Adiga ayaa iga furfuraya khiyaanadan
Oo aan ka dhigo midka aan caawiyay
Waqtigaaga ilaali ereygaaga iyo aniga
Xal deynta aan ku heshiinay waqti ka hor.
Adiga kaliya ayaa iga dhigi kara mid guuleysta
Laga soo bilaabo kulankan, tan iyo isu dheellitirka cadaalada
Wuu i amaahdaa.
Waxaan kaa codsanayaa inaad kaqeybqaadato nafta, damiirka iyo akhlaaqda
Mawduucaas iyo tanas, oo ay taabteen xargahaaga, laftiisu
Waxaan bixiyay lacagtii aan amaahday aniga oo aan haysan
Inta aad ku adkeysan laheyd.
Waxaan kaga tagaa codsigan dardaarankaaga waana rajaynaynaa
Ii dhiib waxa aan weyddiisto.
Qaadashada lacagta ururinta ma aha wax fudud. Waa inaan ka warqabnaa baahiyaha ka yimaada deriskeena markii la dalbanayo bixinta lacag bixinta ama qoondada lacagta ee horey loogu heshiiyay.
Salaaddan wax ku oolka ah ee lagu uruurinayo lacagta, marka lagu daro caawinta na caawinta hanaanka geedi socodka, waxay naga buuxin doontaa xigmad si aan u isticmaalno ereyada saxda ah markaan xukunno.
Waxa intaa u dheer oo dhan, xusuusnow in ereyga Ilaah noogu yeedho inaanaan samayn waxa aannu jeclayn in nalagu sameeyo, waa mabda'a loo yaqaan sharciga dahabiga ah ee waa inaan maskaxda ku hayno waxkasta waa shaqada noocan ah. Tani iyo wixii kale ee salaadda ah ee aan sameyn karno waxay naga dhigeysaa inaan ku sii dhowaanno Rabbiga oo taas naga buuxin doonta dareenka iyo aadamiga markii aan sameyno ururino.
Tukashadani miyaa loo bixiyaa runtii lacag xoog badan?
Sidaas darteed una oración Waa awood badan tahay inaad sameyso waa aaminaada qalbiga maxaa yeelay tani waa shuruud kaliya ee tan iyo bilowgii abuuritaanka adduunka la codsaday sidaa darteed salaaduhu waa waxtar iyo xoog Caalamku waxaa lagu abuuray ereyo waana sababtaas awgeed waa inaan u sameysanaa codsiyada nafteenna laakiin leh mas'uuliyad badan oo aan ka warqabin waxa aan weydiisaneyno, waxay ku dhacayaan is-jeclaan, had iyo jeer waxay ka fekeraan ragga aan saaxiibka nahay halkii aan nafteena ama Faa’iidooyinkayada.
Haddaan tan tan yeelno, sida xaqiiqada ah salaadda aan tukanno waa kuwo aad u awood badan iyadoon loo baahnayn in laambad la shido ama loo diyaariyo deegaanno duco gaar ah.
Ku dadaal inta ugu badan awooda tukashada. Marka waxay ku siinayaan lacag.